'Mums Make Porn', taxanaha jilicsan ee soo kicinaya UK - xnxx - TELES RELAY
ACCUEIL » kale »" Mums Make Porn ", taxanaha porn-ka ee ku dhacaya Boqortooyada Ingiriiska - xnxx
"Mums Make Porn", taxanaha porn-ka ee tantalise UK - xnxx
Miyaan abuuri karnaa "sifo" anshax badan? Tani waa khaangaarka oo bilaabay shan hooyadood oo reer Ingiriis ah ka dib markii la ogaaday, cabsi galiyay, rabshadaha casriga casriga ah. Samee Mums Samee Porn (Moms waxay sameeyaan porno) waxay nagu martiqaaday in ay raacaan Emma, ​​Sarah, Jane, Sarah iyo Anita Louise, mararka qaarkood la dhallinyarada ay saddex dhacdo oo konton daqiiqo kasta. Ujeedada ka soo baxda Kanaalka Channel 4hooyooyinkan waxay doonayaan in ay sameeyaan filim ficil ah oo aan laga xishoon inay carruurtooda tusaan. Tilmaamaha taxanaha: baaritaanka filimka filimka hortiisa ee xirfadlayaasha qaybta iyo sidoo kale qoysaska iyo asxaabta ka qaybgalayaasha. Barnaamijka ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay xaflad lagu qabtay MIPTV oo lagu qabtay maalmo dhowaan Cannes.
Haddii maaddadu ay u muuqan karto iftiin, waxay dhab ahaantii wax ka qabtaa arrimaha muhiimka ah: waxbarashada jinsiga, ogolaanshaha, ama matalaadda kala duwanaanta. gaar ahaan, Samee Mums Samee Porn waxay ku haboon tahay macnaha xasaasiga ah. Boqortooyada Ingiriisku waxay dejinaysaa "block porn ", Nidaamka ayaa looga dooday muddo saddex sano ah si loo xakameeyo helitaanka goobaha qarsoodiga ah.
Caddaynta xiisaha mawduucan, in ka badan daawadayaasha 800 000 ayaa daawaday taxanaha, kuwaas oo ay ugu dambeysay ee la duubay April 3. Filimka ay sameeyeen ka qaybgalayaasha, ayaa xaq u leh FourPlaywuxuu u adeegi doonaa sariirta tijaabada ah ee hey'addaha Ingiriiska: qof kasta oo soo bandhigi kara waa inuu caddeeyaa inuu da 'yar yahay ka hor inta uusan helin fiidiyaha, " oo leh ruqsadda darawalnimada, kaararka deynta ama lambarka telefoonka gacanta, sida lagu tilmaamay Daily Mirror.
Marka ugu horeysa, hooyooyinka waa in ay marka hore ku noqdaan bogga. Malaayiin fiidiyooo pornographic ah oo ku yaalla goobaha akhristayaasha ma laha wax la xiriira filimooyinka Xestiyaha. Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah ma soo laabtaan dhaqanka hadda jira: "Waan ka xumaan lahaa haddii gabdhahaygu daawanayay waxa aan maanta arko. Waxay iiga nixin kartaa jinsiga nolosha, "ayay tiri Sarah, hooyo laba gabdhood oo da'yar ah. "Haddii wiilkayga loola dhaqmo qof dumar ah oo u eg in, weligiis bilaaban dameerkiisa," weli digay Sarah Louise. sheekaysiga khalqigiisa la dhallinyarada, kuwaasoo addoonsada dheeraad ah oo mawduucan ku badan waalidkood, goobaha film lulataaye qoon gaystay iyada oo kulamo la soo saarayaasha, jilayaasha iyo agaasimayaasha X, taxanaha ah ayaa mudnaanta ma badbaadinayo ka qaybgalayaashu ay. Tani waxay sidoo kale ku siin karaan goobaha qosol, marka ka qayb, Protestant, jirsado isha hore ee movie lulataaye ah, ama mid kale matago brojektikani uu goobta filim. Waxaan joognaa England.
Dilidma u dhexeeya porno iyo anshaxa
Awoodda Samee Mums Samee Porn been ah ee mawduuca, aad u adag ka badan waxay u muuqataa. Miyay porno u eg tahay xaqiiqada ama ka faa'iidaysiga xoriyadda runtii ee sheekooyinka, xitaa si loo kiciyo kufsi? Sababtoo ah waxa maal geliya maanta waa filimo oo ay soo jiidanayaan iyo ragga. Filimooyinka kuwaas oo aan ku dhicin sheyga ama shuruudaha lagu raaco ogolaanshahataasina waa waxa niyadjabaya shantaas hooyadood. Marka aad ogtahay in dhallinyarada ugu European - wiilasha iyo gabdhaha - waxaa ay ogaadeen galmada via goobaha lulataaye Streaming free (Pornhub, YouPorn, XVideos ...), iyo gaadiidka u abuuraa (350 billion movies lulataaye daawaday sanad kasta Tuubooyinka), su'aasha waxay noqoneysaa mid si deg-deg ah uga sii dareysa. Mana aha xuduud da'da ah in qof kasta uu heli karo oo isbedelaya. "Wax kasta oo aad sameyso, carruurtaada ayaa arki doona porno! " ayuu yiri agaasimaha Faransiiska Ovidie, wareysi lala yeeshay Point.
« Porn waa waxbarasho jinsi ah haddii aad jeceshahay iyo in kalewuxuu ku darsaday Agaasime Xigeenka iyo Feminist Erika Lust, oo shantii Britian ay ku kulmi doonaan Barcelona. filimada uu, sida ka soo horjeeda lulataaye caadiga ah halkaas oo haweenka u adeegta sida qalab si ay u qanciso Raalli ahaanshaha nin, u doodista ah "galmada dumar wanaagsan." Sidoo kale iyadu waxay caawin doontaa hooyooyinka si ay u bartaan fikradahooda horumarineed. Iyadoo lagu guulaysto furaha? Agaasimaha Erika Lust ayaa ogolaaday inuu fiidiyo filimka laba iyo toban daqiiqadood, Fourplayoo ku yaal boggiisa. Abaalmarin wanaagsan oo loogu talagalay hooyooyinkeena. Iyo gaar ahaan tijaabo wanaagsan oo loogu talagalay kantaroolka cusub ee Ingiriiska ee helitaanka X.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lepoint.fr/monde/mums-make-porn-la-serie-sur-le-porno-qui-emoustille-le-royaume-uni-12-04-2019-2307401_24.php
Fikrado | Xasuuqii sababay dhamaadkii Boqortooyada Ingiriiska - New York Times
Biafra: Nnamdi Kanu oo ku hadlaya ka dib daadkii fiidiyowga "Moment sariirta", ammaanay xaaskiisa